नेपाली भूमि बचाउन सिमानामा बस्ती किन नबसाउने ? - दर्पण संसार
नेपाली भूमि बचाउन सिमानामा बस्ती किन नबसाउने ?
२०७६ चैत्र ४, मंगलबार १२:१४ बजे
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नेपाली भूमि बचाउन सिमानामा बस्ती बसाउनुपर्ने बताएकी छन् । कैलाली, कञ्चनपुरको स्ट्रिप नक्सा छानबिन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको कञ्चनपुरको टोलीसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताइन ।
खानेपानीमन्त्री बिना मगर, महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरु पाल, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु दीपकप्रकाश भट्ट, नरबहादुर धामी, बिना बुढाथोकी लगायत जिल्लाका सांसदहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीयबासी सम्मिलित ज्ञापनपत्र टोलीले नेपाल भारत संयुक्त सीमा भर्भे टोलीले रेखाङ्कन गरि स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दा कञ्चनपुर जिल्लाका केही स्थानमा ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौं हेक्टर जमिन भारतितर पर्नेगरि बनाइएको पाइएको भन्दै तत्काल उक्त कुराको छानबिन गर्न माग गर्दै मन्त्री अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । केन्द्रबाट नै संसदीय टोली पुगेर स्थलगत रुपमा छानबिन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सीमा बचाउन सीमामा बस्ती बसाउने योजना अगाडी ल्याउनुपर्ने बताएकी हुन् । ‘सीमामा बस्ती बसाउने योजना बनाउ । छोड्दिएपछि लैजाने भए । एउटा नदी सिमाना मान्दा नदीको बहाब परिवर्तन हुँदा पनि सिमाना परिवर्तन भएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘हाम्रो सिमानामा अकुपाइ गराउने गरी स्थानीय तहमा समन्वय गरेर बस्ती बसाउ । हामी भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दैछौ त्यहाँ लगेर राखौं । छाडेर गएपछि अर्कोले पेल्ने भए ।’
सरोकारवालाहरुको खबरदारी निरन्तर हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले नागरिक सचेतना चलिरहनुपर्ने बताइन । प्राप्त विवरणहरुको अध्ययन गरेर राजनीतिक सहमति गरेर सहमतिअनुसार नापजाँच गर्ने कुरामा पहलकदमी लिइने उनले बताइन ।
कञ्चनपुर जिल्लामा अहिले सीमा नक्साअनुसार पिलरहरु कहाँ केके छन् भनेर सीमा नापजाँच कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सोही क्रममा केही ठाउँमा बिवाद उत्पन्न भएपछि अहिले नापजाँच कार्य रोकिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।